स्वास्थ्य मन्त्रीकी बुहारीको भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार हुँदै • nepalhealthnews.com
जनस्वास्थ्य सरोकार || प्रकाशित मिति :2019-02-12 07:39:32
स्तन क्यान्सरबाट पीडित उप—प्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्रकुमार यादवकी बुहारी मनिषा यादवको भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलमा भेन्टिलेटरमा राखेर लाइफ सपोर्ट उपचार भइरहेको छ ।
उहाँको क्यान्सर शरीरका अन्य भागमा फैलिसकेको र माघ २७ गते आइतबार राति मनिषालाई अचानक समस्या भएपछि भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल पुर्याइएको थियो ।
मनिषाको उपचारमा हस्पिटलका क्यान्सर विशेषज्ञ डा. प्रभू शाह र डा. अजय कुमार झा संलग्न हुनुहुन्छ ।
२७ वर्षकी मनिषा विगत ३ वर्षदेखि स्तन क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ । उहाँलाई अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा २४ साइकल किमोथेरापी दिइएको थियो । एम्समा १६ महिना उपचार गरेर उहाँलाई राजधानी ल्याइएको थियो । स्तनबाट क्यान्सर अन्य भागमा पनि फैलिसकेकाले अवस्था क्रिटिकल भएको जनाइएको छ ।
मनिषाका श्रीमान् दिपेश यादव हस्पिटलमा बसेर आफ्नी श्रीमतीको केयरमा संलग्न हुनुहुन्छ । जनस्वास्थ्य सरोकारसँग कुरा गर्दै दिपेशले भन्नुभयो—‘मनिषालाई समस्या भएपछि गत आइतबार हस्पिटल ल्याएका छौं । भेन्टिलेटरमा राखेर उनको लाइफ सपोर्ट उपचार भइरहेको छ ।’ ३ वर्षअघि छोरी अमाइरा यादवको जन्म भएपछि मनिषालाई ब्रेष्ट क्यान्सर पत्ता लागेको थियो । अमाइरा अहिले ३ वर्षकी छन् ।